ကျောက်တံတားမြို့နယ် - Gpedia, Your Encyclopedia
ကျောက်တံတား တည်နေရာ၊ မြန်မာ။
ကိုဩဒိနိတ်: 16°46′27″N 96°09′42″E﻿ / ﻿16.774263°N 96.161642°E﻿ / 16.774263; 96.161642ကိုဩဒိနိတ်: 16°46′27″N 96°09′42″E﻿ / ﻿16.774263°N 96.161642°E﻿ / 16.774263; 96.161642
ကျောက်တံတားမြို့နယ် သည် ရန်ကုန်မြို့၏ မြို့လည်ခေါင်တည်ရှိသည်။ ရပ်ကွက် စုစုပေါင်း ၉ ခုရှိသည်။ ကျောက်တံတား၏ အရှေ့ဖက်တွင် ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ တောင်ဖက်တွင် ရန်ကုန်မြစ် နှင့် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ အနောက်ဖက်တွင် ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် နှင့် မြောက်ဖက်တွင် မင်္ဂလာ‌တောင်ညွန့်မြို့နယ်တို့တည်ရှိသည်။ အစိုးရ မူလတန်းကျောင်း ၅ ကျောင်း၊ အလယ်တန်း နှင့် အထက်တန်း ကျောင်း တစ်ကျောင်းစီ ရှိသည်။
ကုန်‌းဘောင်ခေတ်ဦးကာလက ဆူးလေဘုရားဝန်းကျင်တွင် ရေပတ်လည်ဝိုင်းလျက် ရှိရာ အင်္ဂလိပ်‌လက်အောက်သို့ ကျရောက်ချိန် ၁၈၅၂ ခုနှစ်အထိ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံ တောင်ဘက်ခြမ်းမှာ ရေလယ်ကျွန်းကြီး ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ ယင်းကျွန်းထက်တွင် ရေလယ်ကြီးကျောင်းနှင့် ရေလယ်ကလေးကျောင်း(ခ)ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများ တည်ရှိသည်။ ရေလယ်ကျွန်းဘက်မှ ဆူးလေစေတီတော်ကို ဖူးမြော်လိုပါက ကျောက်တံတား (ခ) အုတ်ကျောက်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် တံတားကို ဖြတ်ကျော်သွားရသည်။ ယင်းကျောက်တံတားကို အစွဲပြု၍ နောင်၌ ဆူးလေစေ‌တီတော် အရှေ့ဘက်ရပ်ကို ကျောက်တံတားရပ်ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။
ကျောက်တံတားဇာတိ ထင်ရှားသူ တဦးမှာ စာရေးဆရာ မြို့မအုန်း (ဘားလမ်း၊ ယခု မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း) ဖြစ်သည်။
↑ GAD, Feb 2011.
↑ ၂.၀ ၂.၁ တင်နိုင်တိုး (ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၃). မြန်မာပြည်တစ်ခွင် လမ်းညွှန်. မဇ္ဈိမစာပေ, ၁၂။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကျောက်တံတားမြို့နယ်&oldid=369395" မှ ရယူရန်